I-City Centre Studio-Enokubukwa kwe-Balcony Enhle.
Ifulethi eliyisitudiyo esizimele elinesitayile elinomnyango wangasese ngaphakathi kombhoshongo osanda kuvulwa otholakala enhliziyweni yeSifunda Somlando Nebhizinisi sikaTirana. Indawo ethokomele, ezimele enekhishi kanye negumbi lokugeza lesimanje. Ukubuka okuhle okukuvulandi wakho, kulungele abahambi abahamba ngabodwana nabafuna indawo enethezekile. Isisekelo esihle ongajabulela kuso yonke iTirana ongayinikeza.
Igumbi lestudiyo elethulwe kahle elingamamitha-skwele angama-25 enkabeni yeTirana. Igumbi lesitudiyo esiyisitezi esi-5 lifinyelelwa ngomnyango walo ongaphambili futhi liholela egumbini lokugezela lesimanje kanye nekhishi elinezindawo zokupheka ezilula. Izivakashi zizojabulela ubumfihlo obuphelele nokuhlala okunethezekile, okunethezekile ne-fiber WiFi eshesha kakhulu ne-smart HDTV. Itiye nekhofi, amalineni akotini asanda kuhlanzwa, amathawula, okomisa izinwele namaslipper kanye nezinto zangasese ze-Profesional Line konke kuzohlinzekwa ukuze uzisebenzise ngesikhathi uhlala.
I-Studio itholakala endaweni yase-Blloku , ingxenye ye-cosmopolitan yase-Tirana .Ngaphakathi kwe-radius engu-200m Uzothola i-Coffee Shop's, ama-lounge bar, Izindawo zokudlela (I-Albanian Traditional Cuisine ,I-Italian and International Cuisine).Izakhiwo zomlando zase-Albanias Communist past zitholakala e-Blloku indawo, njengendawo yokuhlala ka-Enver Hoxha *(Umashiqela), i-Enver Hoxha Mausoleum (Iphiramidi yaseTirana), iBunk Art (umnyuziyamu ongaphansi komhlaba).
I-Historical Castle yaseTirana nayo iyindawo ongayivakashela lapho ungahlangana khona nezikhathi zoBukhosi base-Albania. Lapho ungathola ulwazi oluthe xaxa ngamasiko ethu, ukudla, iwayini nezibiliboco.
I-Skanderbeg Square iqhele ngamakhilomitha angu-600 (7 amaminithi ukuhamba), indondo yamazwe ngamazwe ewina indondo yesikwele kanye nendawo ekahle ongayivakashela ngesikhathi sikaKhisimusi.